Akwụkwọ Matt Chandler na Martech Zone |
Edemede site na Matt Chandler kwuru
Na Mọnde, Nọmba 15, 2011 Monday, November 14, 2011 Matt Chandler kwuru
Kpọọ m ngwaahịa nke agụmakwụkwọ nka na-emesapụ aka, mana ekwenyesiri m ike na echiche ụwa ga-ekwupụta site n'ọtụtụ isi mmalite na ahụmịhe o kwere mee. Readinggụ akwụkwọ kachasị ọhụrụ nke ọkachamara n'ọhịa gị dị mma. Nweta ọtụtụ blọọgụ na isiokwu akụkọ dịka ị nwere ike gbasara ụlọ ọrụ gị bara uru. Attga nzukọ na ịnọdụ ala na nkwupụta iji bulie ọrụ gị bara uru. Mana odikwa mkpa ilele anya n’uzo ozo
Ọ bụ ihe kasị Ebube Zeitgeist nke Afọ
Friday, December 10, 2010 Monday, October 3, 2011 Matt Chandler kwuru
Ọ bụ atụmanya dị ukwuu na m na-eche ọbịbịa kwa afọ nke Google Zeitgeist. Ọ bụghị naanị n'ihi na m ga-ekwu ya ọtụtụ, kamakwa n'ihi na ọ bụ ihe dị egwu kwa afọ na-eleba anya na steeti ọchụchọ site na afọ gara aga.
Site na ọtụtụ ọrụ na-agba mbọ maka uche anyị, yana ọtụtụ ntanetị ị na-achịkwa, afọ nke iji otu ngwanrọ iji nweta otu ihe mgbaru ọsọ ka ọ nwụrụ dị ka Dillinger. Dị ka marketers anyị na-atụ anya na-elekọta Facebook mgbasa ozi, ugwo search, SEO, Twitter, blọọgụ, kwuru, mkparịta ụka list ndepụta na-aga.
Nchịkọta ọdịnaya iji wulite ntụkwasị obi
Tuesday, July 6, 2010 Wednesday, November 5, 2014 Matt Chandler kwuru
Nchịkọta ọdịnaya na-esetịpụ ihe edetu na ntinye akụkọ nke ozi na ozi ndị ọzọ. Ndị editọ mmadụ na-ahọrọ akụkọ ndị ọrụ ha "chọrọ" ịmara, dị ka ihe ọzọ iji mee ka ide mmiri jupụta na ọdịnaya nke ndị ọrụ ha họọrọ nwere ike "chọọ" ịmara.